Ihe I Kwesịrị Ime Mgbe Outlook PST /OST Faịlụ dị nwayọ ma ọ bụ anaghị anabata - Blog Iweghachite Data
Home Iweghachite data Iweghachite faịlụ Iweghachite Email Iweghachite data Outlook Ihe I Kwesịrị Ime Mgbe Outlook PST /OST Faịlụ dị nwayọ ma ọ bụ anaghị anabata ozi
Iweghachite data Outlook January 18, 2021
Na taa post, anyị ga-enyocha ihe ndị kpatara kpatara PST ma ọ bụ OST faịlụ nwere ike ịdị nwayọ ma ọ bụ anaghị anabata ma nye ọtụtụ nhọrọ iji dozie nsogbu a.
Ọ bụrụ n’ịchọpụta na sọftụwia email nke onye ahịa gị na-ewe ogologo oge iji buru data data igbe ozi, ịkwesịrị ịchọpụta ihe kpatara ya ma dozie ya. Nke a bụ n'ihi na mgbaàmà ndị a nwere ike igosi nnukwu nsogbu na ngwanrọ MS Outlook gị.
Ihe na-eme PST /OST faịlụ iji nwayọ ma ọ bụ anabataghị?
E nwere ọtụtụ ihe nwere ike imebi arụmọrụ nke Outlook. Ọmụmaatụ, ọ bụla Outlook version nwere isi usoro chọrọ na-aghaghị izute n'ihi na ọ na-arụ ọrụ optimally. Ihe sistemụ chọrọ gụnyere ọsọ ọsọ, ebe nchekwa, oghere diski ike, sistemụ arụmọrụ yana kaadị eserese.
Ọ bụrụ na kọmputa gị anaghị enweta ihe ndị a niile achọrọ, faịlụ email Outlook nwere ike ọ naghị anabata ma ọ bụ nwayọ nwayọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ naanị akụkụ nke ihe ndị achọrọ dị ka ohere diski na ebe nchekwa ka ezutere, mana sistemụ arụmọrụ dị ntakịrị karịa ihe achọrọ, enwere ike itinye ngwa ahụ mana ọ na-ada na oge ọ bụla ị chọrọ imepe ya.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na sistemụ gị na-ezute setịpụrụ setịpụrụ maka sọftụwia Outlook iji gbaa ọsọ, ya na oge PST ma ọ bụ OST faịlụ nwere ike na-eto eto nwayọọ nwayọọ na iru set size ịgba. Mgbe nke a mere, ọ na-esiri ike ịnweta data igbe akwụkwọ ozi gị. Ihe mgbakwunye ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka ịkwalite arụmọrụ na ijikwa data igbe ozi mgbe faili RSS na-enyere gị aka idobe taabụ na akụkọ dị ugbu a. Agbanyeghị, mgbe ị na-ekwe ka mgbakwunye tinyekwuoro na faili RSS, Outlook nwere ike bụrụ nwayọ ma ọ bụ daa imeghe.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na Outlook adịghị emechi nke ọma, njehie nwere ike ime na OST ma ọ bụ PST faịlụ na rụrụ arụ PST or OST data. Nke a nwere ike ime n'ihi mwakpo nje, mmechi mmanye mgbe Outlook ka na-agba ọsọ, na ngwanrọ nke atọ dịka mgbakwunye mgbakwunye na-arụ ọrụ na e-mail ngwa. Oke mmebi ahụ na PST /OST faịlụ ga-ekpebi ma ị ga-enweta data igbe ozi gị.
Esi edozi nsogbu PST / adịghị anabataOST file
Mgbe ị na-eche PST / ngwa ngwa ma ọ bụ na-anaghị anabata ozi ọma.OST faịlụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ime nnyocha zuru ezu iji chọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ. Nkechitart site n'inyocha mgbanwe ọ bụla ị nwere ike ịrụ na ngwa ndị a na nso nso a.
Ọ bụrụ na ị wụnye Outlook, lelee ma kọmputa gị na-ezute usoro chọrọ maka ngwa iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ọ bụghị, nweta nkwalite gị usoro ma ọ bụ wụnye a mbipute nke Outlook na suut gị na kọmputa nkọwa. Ka ị na-eme nke a, gbaa mbọ hụ na ịhọrọ ụdị Outlook ugbu a nke Microsoft na-akwado.
Ngwa email gị nwere ike rụọ ọrụ nke ọma tupu ị nabataghị ma ọ bụ nwayọ. Na nke a, lelee nha nke OST/ PST faịlụ. Ọ bụrụ na nha karịrị oke akwadoro, jiri DataNumen Exchange Recovery or DataNumen Outlook Repair ịrụkwa ma kewaa ndị ahụ OST ma ọ bụ PST faịlụ, karị. Ugbu a, tinye akụkụ nke data igbe ozi gị ma debe obere ndabara OST/ PST faịlụ na-ekwe nkwa na arụmọrụ kacha nke Outlook.
Maka ndị nwere mgbakwunye tinye na RSS na Outlook, ọ bụ ihe amamihe dị na gbanyụọ ha ma megharịatart. Ọ bụrụ na ndị dị nso na-abịakwute adịghị idozi nsogbu ahụ, enwere ohere dị ukwuu na nke gị OST ma ọ bụ PST faịlụ adịghị mma. Jiri DataNumen Outlook Repair iji weghachite gi rụrụ arụ PST faịlụ. N'ihe banyere mmejọ OST faịlụ, jiri DataNumen Exchange Recovery ngwá ọrụ. Mmepụta faịlụ ga-.pst usoro. Ozugbo ị nwetaghachi data igbe akwụkwọ ozi gị, ị nwere ike mepee ya ugbu a site na iji Outlook. Iji kpuchido ozi igbe ozi igbe gị ka emerụ gị site na sọftụwia antivirus gị, ewepụ ya na nyocha faịlụ Outlook.